एस काठमाडौं – YesKathmandu.com
मङ्गलबार १२, चैत २०७५
भोलिसम्म बदली र वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । मुलुकभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज राति पनि देशको मध्य र
जनताको जलविद्युत् : माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीमा ६६ करोड रुपैयाँको आवेदन
काठमाण्डाै । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतको पहिलो आयोजनामा लगानीकर्ताले उल्लेख्य सहभागिता जनाएका छन् । यही चैत ७ गतेदेखि बिक्री सुरु भएको त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा ६६ करोड ३३ लाख ६३ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको आवेदन
८० वर्ष सम्म नागरिकता बाट बञ्चित खुरकुट्टीदेवीले पाइन नागरिकता !
काठमाण्डौ । बझाङको बित्थड चिर गाउँपालिका–५ ओसलकी ८० वर्षीया एक वृद्धाले बल्ल पहिलो पटक नागरिकता पाएकी छन् ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेस सुनारले ओसैलस्थित खुरकुट्टीदेवी महरको घरमै पुगेर नागरिकता दिएका हुन् । शारिरिक अपांगताले अशक्त खुरकुट्टीदेवीले
विप्लवको चेतावनी प्रतिवन्ध नहटाए सरकारविरुद्ध नै प्रतिवन्ध लगाउँछौ !
काठमाण्डौ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए सरकारविरुद्ध नै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली लगायत नेता कार्यकर्ताको गिरफतारीपछि
साविकको विजेता पोर्चुगल बराबरीमा रोकिँदा, इंग्ल्याण्डको सहज जित
काठमाण्डौ । २०२० मा हुने युरोकप छनोट अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा इंग्ल्याण्ड विजयी हुदा पोर्चुगल फेरी बराबरीमा रोकियो ।मंगलबार विहान भएको खेलमा पोर्चुगल सर्वियासँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकियो । पहिलो खेलमा पनि गोलरहित बराबरी
कुवेतसंगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित
काठमाण्डौ । नेपाल दोस्रो अन्तराष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण खेलमा घरेलु टोली कुवेतसंग पराजित भएको छ । सोमबार भएको खेलमा नेपाल कुवेतसंग १–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । अल शबब स्टेडियममा कुवेतलाई जित दिलाउन युसुफ नासिरले निर्णायक